Mazuvano Ekushambadzira Mafambiro eKusimudzira Brand Yako - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Branding ndiyo inoisa a bhizimisi kunze kwevakwikwidzi vayo asi muzera ranhasi redhijitari, yakanaka logo uye zita rinokwezva harina kukwana kumutsa kufarira kwevatengi. The Covidien-19 denda rakagadzira kumwe kuvhiringika kumaindasitiri nevatengi, zvichimanikidza kunyange vatengesi vane ruzivo rwakanyanya kuti vauye nenzira nyowani dzekuti varambe vakakodzera.
Saka, unosimudzira sei brand yako munguva dzakadai? Isu takanyora rondedzero ichakubatsira iwe kutanga kubva kurudyi netsoka kudzidza nezvezvichangoburwa zvemhando dzemhando.
1. Tarisa pane Dhijitari CX
Sekuwedzera uye vazhinji vatengi vari kuve nekwavo kwekutanga kudyidzana nemabhizimusi munyika yedhijitari, kugadzirisa iyo digital CX yave chimwe chezvakanyanya kukosha maitiro ekushambadzira manejimendi. Uye sekureva kwenyanzvi dzekutengesa, maitiro aya haasi kuenda chero kupi nguva chero nguva sekunge 70% yevatengi vanoti denda rakawedzera tarisiro yavo kana zvasvika pakushanda kwedhijitari kwemakambani.
Mhando dzinofanirwa kuchinjira kune kuve dijitari nekupa zvakanyanya intuitive Website dhizaini inoenderana nemararamiro evatengi vavanovavarira uye inopa yakanakisa nyore. Sales uye mabatiro evatengi inofanirwa kuve inoitisa basa, uye kuita kwemunhu mhedzisiro kunofanirwa.
2. Iva neOmnichannel Nzira yekushambadzira
Mazhinji ma brands emazuva ano anotoziva kuti anofanirwa kuve neanoshamisa Website uye kuvapo kwakasimba pasocial network dzakawanda, asi nzira yakasimba yeomnichannel inopfuura kungovepo pamatanho akasiyana edhijitari.
Omnichannel kushambadzira inogadzirisa zvinopihwa, kutumira mameseji, uye gutsikana pazviteshi zvese zvepamhepo zvichibva pane zvakamboitwa nemutengi nerudzi rwako. Iyi data yekugovana mumatanho akasiyana ekushambadzira inova inobatika zvakanyanya, inopa yakawedzera ruzivo rwemunhu, uye inoita kuti brand yako isayeuke.
Sekutsvagurudza, mabrand ane yakasimba omnichannel kugona inowedzera mari yavo neinenge 10% gore rega, ichipfuura kukura kwevanokwikwidza avo vasina omnichannel nzira inopfuura 3%.
3. Funga Kupa Kushambadzira Zvipo
Makambani mazhinji anogona kusaziva kuti zvekushambadzira zvipo zvinogona kuve zvakanakisa kubatsiridza yavo yekumaka nzira. Yekusimudzira yekutengesa yakamisikidzwa nekambani yako logo uye / kana zita rinofanirwa kutarisirwa seinokosha inivhesitimendi uye chikamu cheako wekushambadzira bhajeti.
kutumira zvipo zvekushambadzira inzira yakanaka yekucheka ruzha uye kubatana nevanhu padanho revanhu. Vanoda kusvika makumi mashanu ezviuru zvevanhu vakati vakashanyira saiti yechiratidzo mushure mekugamuchira chipo chekushambadzira uye vangangoita 45% vakaitsvaga online.
Kupa zvipo zvekushambadzira kune vako vatengi zvinogona kubatsira mukumaka, kuvandudza maonero avo ekambani yako, kuvabatsira kurangarira zvigadzirwa zvako nemasevhisi, zviite kuti vawedzere kutenga kubva kwauri. Pamusoro pezvose, zvakachipa kudhura pane mamwe mafomu e kushambadzira uye kushambadzira.
4. Edza Kutengesa Kwevatengi
Nhasi, kutungamirwa nevatengi hakusisiri kungoita ongororo kuti uwane izvo zvinangwa zvevateereri vako. Mabhiza ikozvino ari kushanda pamwe chete nevatengi vavo uye achivasanganisa ivo mukugadzira kwavo maitiro.
Sekureva kwaBulbshare, vanopfuura 75% yevatengi vanofarira mabrand anoshanda navo uye ruzhinji rwevatengi vanoona zvigadzirwa zvinotungamirwa nevatengi sekuvimbika uye kwechokwadi.
Uchishandisa yakanaka CRM chishandiso inogona kukubatsira iwe kusimbisa yako mutengi-inotyairwa yekushambadzira mushandirapamwe nekuchengeta tabo pane ako vatengi uye nekukubatsira iwe kuronga ako marongero.
5. Wedzera kudyidzana
Mushure mekuputika kweCovid mu2020, apo vanhu vazhinji vakamanikidzwa kushandisa chikamu chakakura chenguva yavo online, dyidzana gutsikana inoita kunge iri kudzoka. Mapori, makwikwi, uye quizzes inogona kuve nzira yakanaka yekugadziridza uye kusimudzira iyo CX, dhiraivha kubatikana nemhando yako, uye ita kuti isayeuke. Zvese izvi hazvizongokonzeresa kuti vanhu vadzoke kakawanda kwauri Website asi zvichabatsirawo kukwidziridza masanji ako muSERPs.
Mukuwedzera, interactive gutsikana inokutendera kuti utore data remushandisi, izvo zvinogona kukubatsira kuti unzwisise zvido zvevashandisi vako kuitira kuti ugone kugadzirisa yako ramangwana rekushambadzira kuedza kuti rienderane nezvinodiwa zvavo.
6. Tarisa pane Sustainability uye Inclusivity
Vatengi vanhasi vanodisisa kupfuura nakare kose kana zvasvika pazvinhu zvine chekuita nemhoteredzo uye kusanganisa. Muchokwadi, vanopfuura makumi mana muzana vavo vanoti vangadonhedza mhando dzisingaratidze mutsauko, uye vangangoita makumi masere evatengi vevatengi vanonzwa kuti zvigadzirwa zvine basa rekubatsira nharaunda.
Saka, kana iwe uchida kuramba uri pamusoro pepfungwa dzevatengi, kubatanidzwa uye kusimba kunofanirwa kuve chikamu chekuzivikanwa kwemhando yako. Ita shuwa kuti yako branded gutsikana inomiririra vanhu vemarudzi akasiyana-siyana, madzinza, zvitendero, nezvimwewo kuratidza kuzvipira kwako mukubatanidzwa, uye kuratidza chero maitiro eco-hushamwari arikutorwa nesangano rako kuvandudza maonerwo emhando yako.
Isu tinotarisira kuti iyi rondedzero yematanho ekushambadzira yakubatsira iwe mukuumbwa kwechirongwa chinoshanda icho chinozosimbisa yako brand mu2021 nekupfuura. Rombo rakanaka.